निजी विद्यालयको हितमा हुने गरी छात्रवृत्तिका लागि लड्नेछु – आशिष श्रेष्ठ
प्याब्सनको १४ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फागुन २८ र २९ काठमाडौंमा हुन गइरहेको छ । महाधिवेशनमा देशभरका जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षसहित करिब २२ सय प्याब्सनिष्टहरुको सहभागीता रहनेछ । महाधिवेशनबाट प्याब्सनको नयाँ कार्यसमिति चयन हुनेछ । महाधिवेशनमा हामी प्याब्सनको गतिविधि, चूनौती, समस्याका बारेमा छलफल गरी घोषणा पत्र तयार गरिनेछ । घोषणा पत्र महाधिवेशनको अन्तिम दिन सार्वजनिक गर्ने छौं । मैले अघिल्लो […]
निजी विद्यालयले बजारको अवस्था अनुसार शुल्क निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ
गोपला आचार्य पूर्वअध्यक्ष केन्द्रीय प्याब्सन १) नेपालको शिक्षा क्षेत्रको नीति कस्तो हुनुपर्छ ? नेपालको शिक्षा नीति निजी र सामूदायिक विद्यालयलाई समान रुपमा सञ्चालन हुने खालको हुुनुपर्छ । निजी विद्यालयले अभिभावको अभिरुचि अनुसारको शिक्षा परिपूर्ति गर्दै आइरहेको छ । निजी शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर नबनाई सामुदायिक विद्यालयलाई निजी सँग प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने खालको बनाउनुपर्छ । सरकारले निजी […]
सरकारका नीति नियम निजीमैत्री हुनुपर्छ
ईश्वर बहादुर गुरुङ उपाध्यक्ष केन्द्रीय प्याब्सन १) अबको दिनमा प्याब्सन कसरी अगाडि बढनु पर्छ ? निजी विद्यालयहरुको संगठनका रुपमा रहेको प्याब्सनले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि अझ थप कामहरु गर्दै प्याब्सनलाई सशक्त बनाउदै लैजानुपर्छ । प्याब्सनले अबका दिनमा निजी विद्यालयहरुलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने तर्फ बढी सोच्न आवश्यक छ । २) हिजोका दिनमा सरकारले नै […]
किन रोक्दै छ सरकार निजी क्षेत्रलाई
गोपी कृष्ण न्यौपाने प्रबन्धक सञ्चालक हिल साइड अफ इञ्जिनियरिङ कलेज बालकुमारी, ललितपुर सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीहरुले सार्वजनिक स्कुलमा मात्र पढ्न पाउने शिर्षकको समाचार पढ्दै गर्दा मेरो मनमा धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् । यो दफा खारेज गराउन निजी स्कुलहरुले दबाब दिएका छन् भन्ने कुरा पक्कै पनि सहि होईन । यस सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा आउला नै । मेरो […]
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी विद्यालय आवश्यक छ
हिरा चन्द प्याब्सन वरिष्ठ सल्लाहकार ७ नं.प्रदेश १) नेपालमा अहिले शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ? नेपालमा सरकारी र निजी (संस्थागत) विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । सरकारी विद्यालयहरु अहिले जीर्ण अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारबाट सञ्चालन भएपनि सामूदायिक विद्यालय बिग्रिदैं गएर दयानिय र नाजुक अवस्थामा पुगेका छन् भने संस्थागत विद्यालयहरुले सर्वाङ्गीण विकास गरेका छन् । संस्थागत विद्यालयहरुले […]
मधु लोहनी सचिव केन्द्रीय प्याब्सन प्याब्सनमा नयाँ नेतृत्वको रस्साकस्सी बढेको छ । यतिखेर प्याब्सन नयाँ राष्ट्रिय नेतृत्वको पखाईमा छ । फागुन २७ र २८ गते यसको केन्द्रीय महाधिवेशन हुन गइरहेको छ । प्याब्सनमा ६ हजार निजी विद्यालय आवद्ध रहेका छन् भने तीन हजार जनाले केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रुपमा सहभागिता जनाउँदैछन् । अठ्ठाइस वर्ष अगाडि […]
गाेपी कृष्ण न्याैपाने प्रबन्ध सञ्चालक हिल साइड अफ इञ्जियरिङ कलेज बालकुमारी, काठमाडाैं नेपाललाई समृद्धि मुलुक बनाउन कृषिमा आत्मनिर्भरता, पर्यटन प्रवद्र्धन गरी विदेशी मुद्रा आय आर्जनको स्थायी स्रोत निर्माण गर्दै जाने, अपार जल […]
अबका प्याब्सनका चुनौती धेरै छन्ः आर.बी. कटुवाल
आर.बी. कटुवाल संस्थापक प्रिन्सिपल नेक्सस स्कुल तथा केन्द्रीय प्याब्सन सचिव प्याब्सनको महाधिवेशन आउदैछ तयारी कस्तो भईरहेको छ ? महाधिवेशन भन्दा अघि अधिवेशन सम्पन्न गर्ने काम भईरहेको छ । जिल्ला र स्थानीय तहको अधिवेशनको हामी अन्त्यतिर आईसकेका छौ । ३ नम्बर प्रदेशको अधिवेशन पनि भर्खर सम्पन्न भयो । अबको प्याब्सनका चुनौती के के हुन सक्छन् ? पहिलो […]
कसरी सिक्ने त अंग्रेजी ?
अंग्रेजी विषय सामूदायिक विद्यालयमा पढ्ने धेरै विद्यार्थीहरुलाई गाह्रो लाग्ने विषय हो । अहिले धेरै सामूदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन हुने भएपनि अंग्रेजी भाषाको आधारभूत ज्ञान नै कमजोर भएका कारण अंग्रेजी विषय गाह्रो मान्ने गर्छन् तर निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले भने धेरै अंक ल्याउने विषय भनेको नै अंग्रेजी हो । अंग्रेजी अध्ययन गर्दा केही कुराहरुमा ध्यान […]